U-Leo Man kunye neTaurus Woman ixesha elide ukuhambelana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana U-Leo Man kunye neTaurus Woman ixesha elide ukuhambelana
U-Leo Man kunye neTaurus Woman ixesha elide ukuhambelana
Indoda kaLeo kunye nebhinqa laseTaurus ziyahambelana kakhulu. Bobabini bafuna ukhuseleko kunye nomntu onyanisekileyo ukuba abe ecaleni kwabo bonke ubomi babo.
Ngelixa indoda kaLeo iza kucinga ukuba umfazi waseTaurus unenkani, uya kumbona emangalisa kakhulu. Kodwa konke oku kuya kubenza bafune ukuchitha ixesha elincinci bodwa. Aba babini banokuthandana ubomi babo bonke, ukuba bafunda indlela yokulalanisa kulwalamano lwabo olungcono.
Iikhrayitheriya Isidanga sokuhambelana komfazi waseLeo Man Taurus
Ukubukeka okuhle, ukuzithemba kunye namandla, indoda kaLeo iya kuphumelela intliziyo yomfazi waseTaurus ngomzuzwana. ILeos yaziwa ngokuguqula iintloko ezininzi, kubandakanya enye yeTaurus.
Xa besiya enkundleni, bazimisele kakhulu kwaye bayathandana. Indoda ekulo mqondiso indala kwaye iya kuwuchukumisa umhla wayo ngalo lonke uhlobo lwezimbo zothando.
Ngenxa yokuba umfazi waseTaurus uyinkcubeko yemveli naye, uya kuthanda yonke into ayenzayo. Baza kuphuma baye kwiindawo ezininzi zokutya kunye neeholide zolwandle ngeempelaveki.
Ngelixa agciniweyo kwaye ethule, uyangxola kwaye uyadumisa. Kodwa banomdla kwizinto ezibizayo kwaye ezintle ezifanayo.
Njengabathandi, baya kwenzelana izipho ezininzi ezibalulekileyo. Uya kumqinisekisa ngothando lwakhe ngayo yonke into ayenzayo. Kwaye uya kuziva ekhuselekile kubudlelwane, yeyona nto ayifunayo.
Baza kulunga bobabini kwinto abayenzayo emsebenzini, ke imali ayizukuba yingxaki. Ukuba bayaqondana, uthando lwabo luya kuqhubela phambili lube yinto entle ngakumbi rhoqo ngonyaka.
Bayakwazi ukuhlonipha kwaye bathandane njengabanye abantu kunqabile ukuba benze njalo. Umfazi waseTaurus othandweni unokuba nezinto kunye nomona.
Ayikuko ukuba indoda kaLeo izakukhathazeka. Ngokuchasene noko, uya kuyithatha njengophawu lothando. Ngenxa yokuba akasoze aphule ukuthembana kwakhe, uya kuthakazelelwa kakhulu kwaye anconywe nguye.
Ufuna ukuzinza kunye neqabane lakhe ukuba lizibophelele ngokungathi lifuna amanzi. Uya kufunda kwindlela aziphethe ngayo, kwaye uyokuma ecaleni kwakhe kuyo nantoni na afuna ukuyenza. Ukuba bobabini bayeke ukuba neenkani kwabo, baya kuba sisibini esonwabileyo.
Xa eyakucela ukuzinikela nothando, uya kufuna ukunconywa nokunconywa. Unokuba neengxaki kuko konke ukunconywa, kuba uya kukhangela ukubonwa komzimba.
Kodwa indoda kaLeo igcwele uthando kunye nomthandi omkhulu. Ke, izinto phakathi kwazo ziya kuba ngaphezulu kokulungileyo kwigumbi lokulala.
Uya kukhula ngakumbi ukuba uyalibala ukuba kufuneka abe ngumphathi. Ukuba izinto zihamba njengoko bekucwangcisiwe phakathi kwabo, baya kuzisa okona kulungileyo omnye komnye. Kwaye baya kuyenza ngelixa bonwabile. Unxibelelwano lwabo lunamathuba onke okuba nomdla, nangona. Oku mhlawumbi kuya kubagcina behlangene.
Kunganzima ukuba umfazi waseTaurus kunye nendoda enguLeo bahlangane, kuba zombini zimpawu ezizinzileyo. Kwaye oku kuthetha ukuba baneenkani. Kungenzeka ukuba baya kuqhubeka nolwalamano lwabo nangona bebuhlungu.
Ukuthembeka kakhulu ngamanye amaxesha kunokuba yingozi. Kwaye kunjalo nakwezimbini.
Bayakuqhekeza, benze phezulu. Lilonke, ubomi babo kunye buya kuba mnandi. Kunzima ukusho ukuba baya kuhlala njengesiqabane ixesha elide.
Ngenxa yokuba umfazi waseTaurus akathandi ukulwa kangako, kunokwenzeka ukuba nguye oya kunika kuqala xa besilwa. Kodwa sukucinga ukuba eli nenekazi alizukuyixhasa imbono yalo ngeengxoxo eziqinileyo. Unomsindo ofanayo ofanayo nowendoda yakhe, uLeo.
Ukuba aba babini bajolise kancinci ukuba ngubani olungileyo okanye ongalunganga, baya kuba nethuba lokonwabela ubudlelwane babo ngakumbi. Bobabini bafuna into ezinzileyo ekugqibeleni. Ke, kuya kufuneka bayisebenzele nzima.
Unethemba lokumphembelela ngendlela enkulu, okanye ade amlawule. Kodwa akunamsebenzi nokuba uza kuba neenkani kwaye abe nomlilo kangakanani, izinto aziyi kuhamba njengoko bekucwangcisiwe. Uya kuba uxakekile esenza enye into, kwaye uya kugcina ngokulawula kuphela isiqingatha sakhe sobudlelwane.
Xa bexabana, uya kukhumbula izinto zangaphambili kwaye azise ekukhanyeni.
Kodwa nangona kukho konke oku, baya kuba nobomi obumnandi kunye. Uthanda ikhaya elinethezekile apho anokuchitha khona ixesha lakhe elininzi, ufuna ukuphuma kangangoko. Kwaye oku kunokubangela ukungavisisani phakathi kwabo.
Bobabini indoda yakwaLeo kunye nomfazi waseTaurus bakholelwa emtshatweni kwaye bafuna ukuzibophelela ebomini. Kodwa kufuneka balumke kakhulu xa bekhetha ukuba bachitha nabani ubomi babo, kuba iyantlukwano inokubonakala.
Ukuba uthatha isigqibo sokumenza umyeni wakhe, uyakuphila ubomi obonwabisayo, obutofotofo. Intlonipho kunye nokuzinikela kuya kuba yinto eqhelekileyo kubo bobabini. Umfazi waseTaurus unokuba ngumhlobo wendoda, uhlala ekhona ukugcina iqabane lakhe lonwabile kwaye lomelele.
Uthando lwabo luya kuba namandla. Zininzi izinto ezinxulumene nomtshato wabo, kwaye baya kuzijonga zonke. Bayakuthanda ukuchitha ixesha kunye, ngoko abayi kuthandabuza ukonwaba naphina apho baya khona.
Kuba bobabini banesakhono kwiklasi kunye nokunethezeka, baya kufuna ukuthenga ezona zinto zibiza kakhulu. Uya kuba ngulowo ucinga ngekamva labo lezemali rhoqo, nangona kunjalo. Izimbo zothando azakuzenza ziya kunconywa kakhulu nguye.
Kuba une-ego enkulu, baya kulwa ngenxa yezona zinto zingabalulekanga. Kwaye baya kuba nemilo emikhulu, hayi into enokulityalwa ngokulula. Uthando lwabo luya komelela ekuhambeni kwexesha. Njengoko banembeko nothando olumsulwa omnye komnye, baya kuba nakho ukuba kunye ngonaphakade.
Nayiphi na i-horoscope ingathi le yindibaniselwano enkulu yomtshato. Kufana nala maqabane mabini afanelwe ngokwenene omnye komnye. Ukuba namanqanaba aphezulu amandla, ngekhe bakukhathalele ukubeka umboniso kubo bonke abahlobo babo kunye nosapho.
Njengabazali, baya kuba kukuzibandakanya kancinci kuthando lwabo. Kodwa ubuncinci abantwana babo baya kwazi ukuba umtshato owomeleleyo ujongeka kanjani.
Ingcebiso yokugqibela ngoLeo Man kunye noMfazi weTaurus
Ixesha lokuthandana phakathi kwendoda enguLeo kunye nomfazi waseTaurus inokuba yeyona nto imnandi kakhulu kwi-zodiac eyakha yabonwa. Bobabini bonwabile ukubona ukuba umhla olandelayo uza kubazisela ntoni, aba babini baya kubeka uthando oluninzi kulwalamano lwabo. Kwaye baya kuba nesisa kakhulu kwiinzame abakulungeleyo ukutyala imali. Yonke into ukusukela kumhla wabo wokuqala iya kuhamba ngcono kuphela.
Indoda ka-Leo luphawu lomlilo olucwangcisiweyo, iTaurus nguMhlaba oMiselweyo. Uyasebenza, unekratshi nobukhosi. Into yokuba zilungisiwe zithetha ukuba baneenkani kwaye bafuna uzinzo. Baya kuhlala befumanisa ukuba bacinga ngokufanayo kwimiba emininzi.
Nangona kunjalo, xa bevuma, baya kuba kwiphepha elinye kuphela ixesha elifutshane. Kunzima ngokwenene kubo ukuba babe nembono efanayo xa kufikwa kwizifundo ezinzulu.
Uya kuba nekratshi lakhe lonke ixesha ephikisana naye. I-Taurus ayinakushukunyiswa, ngelixa u-Leo enekratshi kakhulu ukuba avume ukuba wakhe waphazama.
Kodwa ubudlelwane bendoda yaseTaurus yomfazi Taurus busenokuhlala buhambelana, ngakumbi ukuba uya esiba mbi kakhulu kwaye uya esiba nenkani. Ukucinga kakhulu ngokuziphindezela kwimeko yakhe kunokukhokelela kwingqumbo.
Kuyimfuneko ukuba i-ego yendoda ka-Leo iyondliwa. Ukuba ukhumbula ukumncoma, baya konwaba ngakumbi. Ukuba inguye ofuna ukumtsala, kufuneka acinge nzulu ngomtshato, kuba uya kuthi ngokuqinisekileyo.
Ngomhla wabo wokuqala, kufuneka baye kwindawo yokutyela yabucala. Kude kube baqwalaselane ngokungathí sina, akufuneki aveze umdla wakhe wokuzonwabisa.
Ukuba inguye ofuna ingqalelo yakhe, kufuneka angabi neenkani. Umonde yinto efunwa ngumfazi waseTaurus kubudlelwane nendoda kaLeo. Ukumnika yonke ingqalelo kuya kusebenza.
Lo mfo ufuna ukuziva ekhethekile kwaye exatyisiwe. Ukujonga ukunyaniseka kubaluleke kakhulu, ke ukumenza ukuba amthembe iya kuba licebo elihle.
Ukuze olu lwalamano lusebenze, omabini amaqabane kufuneka abe bhetyebhetye. Usenokucinga ukuba unesiphithiphithi kuba efuna ukubonisa abantu. Okona egcina imiqondiso emikhulu kuye, kokukhona eya kumthanda.
Umfazi waseTaurus othandweni: Ngaba uyalingana?
Abadlali beTaurus Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
Ukuhambelana kweTaurus kunye neLeo kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Umfazi weTaurus kunye nezinye iZimpawu
Umfazi we-Aquarius othandweni: Ngaba uyalingana?
Uphawu lweZodiac ngoJulayi 2
eshiya umntu ofezela omnye kuphela
uphawu lweenkwenkwezi ngomatshi 31
umfazi we-aries kunye ne-aquarius umtshato womntu
intombi yempawu ezinothando